M.L. Exercise Book
1. Make Your Migration Work (Yinmay Zaw's story)
2. Make Your Migration Work (Kyaw Lin's story)
3. Make Your Migration Work (Cho Zin's story)
4. Make Your Migration Work (Cho Zin's story part 2)
5. Mogok on 7Day
7. Alanpya Pagoda
8. Arlein Nga Sint Pagoda
☼&nbsp1. Make Your Migration Work (Yinmay Zaw's story) ☼
သူစိမ်းတစ်ယောက်ပြုံးပြတာလေးတွေ၊ မဆေးရသေးတဲ့ ပန်းကန်ပြားတွေ၊ ဓတ်ကြိုးတန်းပေါ်က ငှက်ကလေးတွေ။ သူများနိုင်ငံမို့လားမသိဘူး။ တွေ့သမျှမြင်သမျှ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေသလိုပဲ။
ကျွန်မနာမည် ယဥ်မေဇော်ပါ။ အခုလောလောဆယ်တော့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဟိုတယ်ကြီးမှာ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ နည်းနည်းတော့ များသွားပြီထင်တယ်။ ကမ္ဘာဆိုတော့ ထားပါ။ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းဆိုတော့ အလုပ်က အရမ်းကြီး ကောင်းလှတယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ လူသစ်တွေနဲ့လည်း တွေ့ရတယ်။ ပိုက်ဆံလည်းရတယ်ဆိုတော့ ကျွန်မတော့ ပျော်နေတာပဲ။ အဓိကကတော့ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ နေရာမှာ အလုပ်လုပ်နေနိုင်တာကိုက ကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့။ ကျွန်မဒီကိုရောက်တာ ၂နှစ်ရှိပါပြီ။
အရင်ကတော့ ရွာမှာပဲပေါ့။ ရာဘာခြံမှာ လုပ်တယ်လေ။ အဲဒီတုန်းကတော့ ဘာဖြစ်ချင်မှန်းမသိပါဘူး။ သိတာတစ်ခုကတော့ အဲဒီရွာမှာပဲ ရာဘာဆက်ခြစ်နေမယ်ဆို ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် အခုလိုတစ်ဖက်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပေါ့။ အစကတော့ မိဘတွေက စိုးရိမ်တာပေါ့။ အဲလိုနိုင်ငံခြားမှာလုပ်ပြီး ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေ အကြောင်းကလည်း နည်းတာမှမဟုတ်တာ။ ကျွန်မကတော့ လာမယ်ဆိုကတည်းက သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို အိမ်စာလုပ်ထားတာပေါ့။ အဖေရယ် ကျွန်မရယ် အင်တာနက်ကနေပြီး ရှာကြည့်တယ်လေ။ ဘယ်လိုစာရွက် စာတမ်းတွေ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ပတ်စပို့ရှိဖို့ ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာရယ် အလုပ်ရှင်တစ်ယောက်က တကယ်ရိုးသားတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စပို့တွေကို သိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ သမီးက နိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုတော့ အစစအရာရာ
ဂရုစိုက်မယ်နော်သမီး။ သြော် ဟုတ်ကဲ့ပါအမေ။ ဟိုမှာ ရေချိုးတာတို့ ဂရုစိုက်ချိုး။ ဟုတ်။ ဆေးပါသေးလား။ ဆေး။ ဟုတ်ပါတယ်။ အမကြီးဆီကဖုန်းလာတယ်။ သမီးခဏလေးဖုန်းသွားပြောလိုက်ဦးမယ်နော်။ အေးသမီး ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပြီ။ ဟဲလို အစ်မကြီးလား။ ဟုတ်တယ်။ ညီမလေးအဝတ်အစားတွေ ဒီမှာထည့်နေတယ်။ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းတော့ တစ်သက်လုံးမဖြစ်ချင်ဘူး။ ပြောနိုင်မလား။ တစ်နေ့မှာဒီလိုဟိုတယ်ကြီးတစ်လုံးလောက် ကျွန်မလည်းပိုင်ရင်ပိုင်မှာပေါ့။ အခုလောလောဆယ်တော့ အလုပ်ဆက်ကြိုးစားမယ်။ ရွာမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစုကို ကျွန်မအတွက်ဆက်ပြီး ဂုဏ်ယူနိုင်အောင်လို့လေ။
A stranger’s smile. Even the dirty dishes. Birds on the wire. Everything seems new and exciting in another country.
My name is Yinmay Zaw. Now, I’m working asamaid in the nicest hotel in the world. Maybe I’m exaggerating. Whatever! It’s not exactlyafun job, but I’m happy enough. I meet interesting people. I’m earning money. Most importantly, I’m inasafe and comfortable environment. I came here two years ago, fromasmall village where I used to work on our family rubber plantation.
Back then, I didn’t know what I wanted to do with my life. But one thing was sure, I wasn’t going to get anyhere doing that. I decided migration would be the best thing for me. At first, my parents were worried. We’d heard many scary stories about migrants in foreign countries. I did my homework. I tried to get as much information as I could. My father and I searched on the internet for advice on things like the documents and paperwork I would need. I learned important little things like how important my passport is. And thatagood employer should never hold on to my passport.
Please be careful when you get there. Yes mom. Whenever you eat or shower. Yep. Don’t forget your medicine. Okay dad. Mom, sis is calling. Let me talk to her outside forawhile. Is that you sis? Yeah, I’m packing. I don’t want to beahousekeeper forever. Who knows, maybe if I work hard enough, one day I’ll run my own hotel! In the meantime, I’ll work hard and make my family proud.
☼&nbsp2. Make Your Migration Work (Kyaw Lin's story) ☼
ကျွန်တော်ကလက်သမားဆရာလေ။ ဒီရွာအနီးအနားက အိမ်အသစ်တော်တော်များများကတော့ ကျွန်တော့လက်ရာတွေပဲပေါ့။ ဒီအတိုင်းပဲ ခုတ်မယ်နော်။ ဟုတ်။ သေချာလည်းခုတ်ဦး။ လက်ထိဦးမယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့။ ဒီရွာကကိုယ့်ရွာဆိုတော့ ချစ်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီထက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ အလုပ်မျိုးတော့ လုပ်ချင်တာပေါ့နော်။ အဲဒါကြောင့်လည်း တခြားတစ်နေရာမှာ အလုပ်သွားလုပ်ဖို့ လုပ်လိုက်သေးတယ်လေ။ အဆင်တော့ မပြေခဲ့ပါဘူးဗျာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်လောက်က ကျွန်တော် ရန်ကုန်ဘက် ဆင်းခဲ့သေးတယ်လေ။ အဲဒီမှာ ပွဲစားတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်။ ပြောတာပေါ့။ သူက။ အလုပ်သွားလုပ်ရင် ဘယ်လိုဘယ်ညာပေါ့။ သူပြောတာတွေကတော့ သူ့ကိုပိုက်ဆံပေးလိုက်ရုံပဲ။ အကုန်အပြီးအစီး စီစဥ်ပေးမယ်ပေါ့။ အဲဒီတုန်းကတော့ တန်တယ်ထင်တာကိုး။ ရေခြားမြေခြားမှာ ဘဝအသစ်စရမှာလေ။ မှတ်မိပါသေးတယ်။ ရန်ကုန်လေဆိတ်မှာလေ။ အဲဒီနေ့က ရှပ်အင်္ကျီအကောင်းလေးဝတ်။ အသစ်ဝယ်ထားတဲ့ ကျောပိုးလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့ စောင့်နေတာပေါ့။ ဆရာသမားက ပေါ်မလားဘူး။ အခုကျွန်တော့်ညီ။ ညီအရင်းတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ညီအကိုလို နေကြတာကို ပြောတာ။ အခုရန်ကုန်မှာလေ။ သူက။ အဲဒါသူက နိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ဖို့ စဥ်းစားနေတယ်တဲ့။ ကျွန်တော့်ညီကတော့ ကျွန်တော့်လို မဖြစ်စေရဘူး။ နောက်မှ ကျွန်တော်သိတယ်ဗျာ။ အခုတော့ အမ်အာစီလို့ခေါ်တဲ့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ ထောက်ပံ့ကူညီရေး ဗဟိုဌာနတို့။ အလုပ်အကိုင်နဲ့ အလုပ်သမား ရှာဖွေရေးရုံးတို့ဆိုတာမျိုးတွေရှိနေပြီ။ မြို့တော်တော်များများမှာ ရှိတယ်လို့ ပြောတယ်။ ကျွန်တော့်တုန်းကသာ အဲလိုနေရာတွေ သိခဲ့မယ်ဆို ဒုက္ခရောက်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ နိုင်ငံခြားကို ကျွန်တော်သွားဖို့ကြိုးစားတုန်းကတော့ ငယ်လည်းငယ်သေးတယ် နုံတာပေါ့။ ဘာလုပ်ရမယ်။ ဘာကိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဗဟုသုတရှိမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မှန်မှန်ချနိုင်မှာ။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ ကံတရားက ဘယ်လိုလာမလဲတော့ မသိဘူးပေါ့လေ။ အခုလောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော့်လို လူမျိုးတွေ အကြံဉာဏ်လေးဖြစ်ဖြစ် ပေးချင်တယ်ဗျာ။ ငါပြောသလိုလုပ်။ ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့ ဆိုတာမျိုးပေါ့။
I’macarpenter and I built most of the new houses around here. Now, just cut it as marked. Be careful you don’t hurt yourself! I love it here, but I think I’m destined for greater things. But the last time I tried, it didn’t work out so well for me. Five years ago I went to Yangon to try and find better opportunities. I came acrossabroker who told me what an amazing opportunity working abroad would be. He told me to make an upfront payment and he would sort everything out that I needed for the move. It felt worth it, for the promise ofanew life. I still remember that day. I was wearing my best shirt andanew backpack that I’d boughtafew days ago. He never showed up. My little brother Zayar – he’s not really my brother, but I call him that! …He moved to Yangonayear ago, following in my footsteps. Now, he wants to make the move abroad too. I’m determined that he doesn’t make the same mistakes I made. I found out later that you can go toaLabor Exchange Office oraMigrant Resource Center. They have offices around Myanmar. If I’d known that when I was moving, it would have helpedalot. I was naïve when I tried to move. But the right knowledge can empower anyone to make the right decisions. I don’t know what fate has in store for me. Meanwhile, I want to help other aspiring migrants like me. It’s like, “do what I say, not what I do.
☼&nbsp3. Make Your Migration Work (Cho Zin's story) ☼
ကိုယ်တွေအတွက်ကတော့ ဒီနေရာလေးကတော့ အိမ်ပါပဲ။ တစ်သက်လုံးဒီမှာ နေလာတာကိုး။ ဒါကတော့ မြေးမလေးခက်ခက်စုတဲ့ ကလေးသဘာဝအတိုင်း ဘာရယ်မသိ အမြဲပျော်နေတာပေါ့။ ထိန်းရတာတော့ ခက်တယ်အေ။ သူ့အဖေကတော့ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှတော့ ဆုံးသွားတယ်။ သူ့အမေကျွန်မသမီးကတော့ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်သွားလုပ်နေတယ်လေ။ ကလေးကို ကျောင်းထားဖို့လေ။ အစကတော့ ကိုယ်တွေက သဘောမတူပါဘူး။ အမေပဲ ကိုယ့ကလေးနဲ့ ကိုယ်နေရမှာပေါ့။ နောက်တော့လည်း နားလည်လာပါတယ်။ အဲလိုလုပ်မှပဲ ကလေးအနာဂတ်ကောင်းမှာလေ။ အဲလိုကြီးကြီးမားမားကြီးစွန့်စားတော့မယ်ဆိုရင်တော့ မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဖို့ လိုတယ်လေ။ စုတာစု သုံးတာသုံးပေါ့။ အကြွေးဆပ်ဖို့အတွက်လည်း ချန်ရသေးတယ်လေ။ အဖွားအဖွား အဖွားအဲဒါဘာလုပ်နေတာလဲ။ အသုံးစရိတ်တွေ ရေးနေတာလေသမီးရဲ့။ တစ်လကို ဆန်က ဘယ်လောက်ကုန်တယ် ဆီက ဘယ်လောက်ကုန်တယ် နော်။ အကြွေးကျေဖို့တစ်လ ဘယ်လောက်စုရမလဲဆိုတာ အရင်တွက်တယ်။ အဲလောက်လည်းစုတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်လည်းထားထားတယ်လေ။ စာရင်းမှတ်ဖို့ပေါ့။ သူပြန်ပို့တဲ့ပိုက်ဆံက သိပ်တော့မများလှပါဘူး။ ဒီမှာကြုံရာကျပန်းလုပ်တာနဲ့ဆိုရင်တော့ သာတာပေါ့။ ဒီမှာတုန်းကဆို ကလေးကပါ အလုပ်လိုက်လုပ်ရသေးတယ်လေ။ ဘယ်လိုကျောင်းတက်မတုန်း။ ဟယ် သမီးဆီကဖုန်းတော့ သမီးချိုဇင်။ အဖွား အဖွား အမေ့က ဖုန်းလာတာလား။ သမီးလည်း ဖုန်းပြောချင်တယ်။ သမီးရဲ့သမီးလေးကလည်း ဒီမှာ စကားပြောချင်လို့တဲ့ ပြောလိုက်ဦးနော်။ ခက်ခက်စုမှာ သူ့အမေနဲ့ ဝေးနေရတော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ ဒီမှာလည်းသူ့ကို ချစ်ကြသူလည်း အများကြီးပဲ။ ကိုယ့်သမီးချိုဇင်ကိုတော့ ရွေးချယ်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောင်တမရစေချင်ဘူး။ ခက်ခက်စုကတော့ ပြောနေတာပဲ ဆရာမလုပ်မယ်တို့ဘာတို့။ ကြီးလာရင်လည်း ပြောင်းရင် ပြောင်းသွားမှာပေါ့။ အရေးကြီးတာကတော့ ပညာရေးပဲ။ ကိုယ်တွေကတော့ တစ်နှစ်သုံးနဲ့ ကကြီးခခွေးပဲ သိတာပါ။ သူ့ဆီက ပြန်သင်နေရတယ်။ စာတော်တယ်ဆိုတော့ ကိုယ်တွေအတွက်ကတော့ မျှော်လင့်ချက်လေးပေါ့။ ခက်ခက်စုရော ချိုဇင်ရော အကုန်အဆင်ပြေမှာပါ။ အားလုံးက ပံ့ပိုးပေးနေတာပဲ။
This is my village, my home. I’ve been living here my whole life. This little girl is my granddaughter, khet khet su. She’sareally happy child. I guess she can sometimes be quiteahandful! Hello, Daw Tin Mya! Here’s your package. Unfortunately, her father passed away when she was only little. Her mother, my daughter, moved to Yangon to pay for her education. I fought against it at first. I thoughtamother’s place is by her child. But it was clear how much it meant to my daughter that Khet Khet Su could haveabetter future. If my daughter was going to make this sacrifice however, we wanted to be sure that we would do things right. So we save and spend the money my daughter sends home with care, so that we can pay off our debts. Grandma, what are you doing? I’m writing down this month’s expenses. We calculated how much we needed every month to pay off our debts, then made sure we saved that amount, makinganote of everything inabook. It’s notalot of money that gets sent home, but it’s more than she could make here. And it means Khet Khet Su can go to school instead of working. Oh! It’s my daughter! Cho Zin. Grandma, is it mom? Can I talk to her too? Your daughter wants to talk to you. Here you go. Of course it’s hard on Khet Khet Su that her mother is away. But she hasalot of love around her. And I don’t want my daughter to regret her choice. Khet Khet Su seems happy now. She says all the time that she wants to beateacher. Who knows, it may change when she grows up. What’s important is her education. She’sabright young thing. For me, I only know numbers andalittle of the alphabet. I think I learn more from her than she learns from me. She is really doing so well at school. She is our hope. Khet Khet Su and Cho Zin, they’ll both be fine, as long as we can support them.
☼&nbsp4. Make Your Migration Work (Cho Zin's story part 2) ☼
ကျွန်မ တစ်နေ့တစ်နေ့လုပ်ရတာတော့ ဒါပါပဲ။ သူတို့ကို ခြေထောက်လေး လုပ်ပေးလိုက်။ မျက်လုံးလေးတွေ တပ်ပေးလိုက်။ ပါးစပ်လေးတွေ ပြင်ပေးလိုက်နဲ့ပေါ့။ ကလေးလေးတွေက ဒီလိုမျိုးအရုပ်လေးတွေနဲ့ ဆော့ရရင်တော့ ပျော်ကြမှာပဲလေ။ အမေ သမီးဒီအင်္ကျီလေး ဝတ်ချင်တယ်။ သမီးကလည်း အဲအင်္ကျီကအသစ်ကြီးလေ…ဝတ်လို့မရဘူး။ အမေကလည်း သမီး ဝတ်ချင်လို့ပါ။ သမီးရယ် စျေးရောင်းသွားမှာပဲ။ ဒီတိုင်းပဲ သွားလိုက်။ သွားသွား အဲအင်္ကျီ သွားသိမ်းထားလိုက်။ အမေကလည်း။ ကျွန်မသမီးလေး ခက်ခက်စုနဲ့အတူ မနေရတာတောင်ကြာပြီ။ ရွာမှာတုန်းကတော့ အတူတူပေါ့။ သူ့အဖေကျွန်မယောက်ျားဆုံးပြီးကတည်းက ကိုယ်တွေလည်း အကြွေးတွေနဲ့လေ။ အဖေနဲ့အမေကတော့ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ မနှစ်က စပါးအထွက်က မကောင်းတော့ သူတို့လည်း အဆင်သိပ်မပြေဘူးလေ။ မငတ်အောင်တော့ ရှာကြံစားသောက်ရတာပဲ။ အဲဒီတုန်းကတော့ ကလေးလည်းကျောင်းခဏထွက်။ အမေဖြစ်တဲ့ ကျွန်မလည်း စျေးတွေဘာတွေ လိုက်ရောင်းရတာပေါ့။ တတ်နိုင်သလောက်တော့ အဆင်ပြေအောင် နေရတာပဲ။ အဲဒါကိုတောင် အကြွေးကမလွတ်နိုင်ဘူး။ မှတ်မိပါသေးတယ်။ ခက်ခက်စု ၈နှစ်ပြည့်တုန်းက ပြောတာ။ မေကြီးတဲ့ သမီးဆရာမဖြစ်ချင်တယ်တဲ့။ ကျွန်မသိလိုက်ပါတယ်။ ဒီတိုင်းနေလို့တော့ မဖြစ်တော့ဘူး။ သမီးလေးအနာဂတ်အတွက် စဥ်းစားတော့မယ်လေ။ အဲဒါကြောင့်ကျွန်မ အခုလိုမျိုး ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကြီး ချခဲ့တာပါ။ အရင်ဆုံးမြို့တွေဘာတွေ တက်ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆို ဘာတွေလိုအပ်မလဲ အရင်လေ့လာရတယ်လေ။ အစီအစဥ်တွေ ဘာတွေလည်း ဆွဲကြည့်တာပေါ့။ ဟိုလိုတွက်ကြည့် ဒီလိုတွက်ကြည့် လုပ်ကြည့်တော့။ ရတဲ့ငွေလေးကိုသာ သေချာလေးသုံးမယ်ဆိုရင် အကြွေးတွေလည်း ကျေနိုင်တယ်လေ။ သမီးလေးကိုတော့ ကျွန်မအမေ သူ့အဖွားနဲ့ ထားခဲ့ရတာပေါ့။ ဒီရောက်တော့ အရုပ်စက်ရုံမှာ အလုပ်ရတယ်။ အရုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ အေးဆေးလို့ထင်တာ။ သင်စရာတွေကတော့ အများကြီးပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ ဒါချည်းပဲ ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်နေရတာလေ။ ကိုယ်တွေလက်တွေလည်း နာတာပေါ့။ အခုဒီမှာ တခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အဆောင်မှာ အတူတူနေတယ်လေ။ ရောက်ခါစကတော့ ငိုတာပေါ့။ နောက်ပိုင်းတော့ အဆင်ပြေလာပါတယ်။ ထမင်းသွားစားမယ် လိုက်မလား။ ပြီးမှလိုက်ခဲ့မယ်လေနော်။ အဲဒါဆို သွားနှင့်ပြီနော်။ အေးပါအေးပါ။ ရွာမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း သတိရတယ်လေ။ သမီးလေးကိုတော့ အလွမ်းဆုံးပဲ။ ရွာမှာ ကျွန်မသမီးလေးကို စောင့်ရှောက်ဖို့ ကျွန်မမိဘတွေ ကျန်ခဲ့တာပဲ ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောရမယ်။ ကျွန်မပို့လိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံလေးတွေကိုလည်း သေချာလေး စုစောင့်ပေးထားတယ်လေ။ စိတ်ချရတာပေါ့။ ရွာပြန်နေမယ်ဆိုရင် ပြန်လို့တော့ရတာပေါ့။ အပြီးတော့မပြန်သေးပါဘူး။ အခုလိုမျိုး စွန့်စားမှပဲ။ ကိုယ့်သားသမီးအနာဂတ် ကောင်းလာမှာကိုး။
Everyday I do the same routine. Give him legs, add his eyes, fix his mouth. Children are happy to play with these toys. Mom, I would like to wear this dress today. This dress is too nice and new. You can’t wear it for now. Mom please, I really want to. Work are going to work, girl. Just wear what you have on. Mom. It’s beenawhile since I’ve seen my own daughter, Khet Khet Su. Back home we used to see each other all the time. Since my husband passed away, we have gone into debt. Normally my parents would help. But their crops failed last year and they are also in trouble. We had to look for work elsewhere to make ends meet. I took her out of school. And we worked together delivering food foralocal farmer. I did what I could. But it felt like we were just falling deeper into debt. On my daughter’s 8 th birthday, she turned to me and said, “mommy, I want to beateacher”. It was the first time I had ever thought seriously about her future. I realized that we couldn’t go on like this. So, I madeabig choice. I learned about how to migrate and made some plans. I discovered I could send back enough money to slowly pay off our debts. So, I left my daughter with my parents and made the move. When I got here, I foundajob atatoy factory. I thought it would be easy, but actually it was very difficult. It gets repetitive, and my body starts aching. They arrangedaplace for me to stay with other coworkers. When I first arrived, I cried and cried. But things got better as I got to know people. Do you want to come with us for lunch? I will come along later. Okay, we’re going first. Okay. I still miss the friends I used to talk to. And of course I miss my daughter the most. I’m lucky that my family is there to look after Khet Su – my mother and to manage and save the money that I send. It gives me great reassurance. I could turn back at any time, if I wanted to, but I won’t. I know that my sacrifice will meanabetter future for the one I care about the most.
☼&nbsp5. Mogok on 7Day ☼
နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေဝင်ရောက်တာကို ကန့်သတ်ထားတဲ့ မိုးကုတ်က နယ်မြေအချို့ကို ပြန်လည်ခွင့်ပြု ပြီးတဲ့ နောက် လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွား ၁၄၀၀ ကျော် လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်လို့ ဟိုတယ် နဲ့ ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီစာရင်းဟာ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေကို လည်ပတ်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ ဒီနှစ် ဇန်နဝါရီလကနေ နိုဝင်ဘာလအထိ စာရင်း ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေကို ပြန်လည်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ မိုးကုတ်မြို့နယ် ထဲက ဒေသတွေကတော့ ကျောက်ပြသဒ်၊ ပန်လင်- ဘားနဒ်ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေကို ပြန်လည် ခွင့်ပြုလိုက်ပေမယ့် မိုးကုတ်ကို သွားရောက် လည်ပတ်မယ်ဆိုရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်းကနေ သွားရမှာဖြစ်ပြီး ဧည့်လမ်းညွှန်မဖြစ်မနေ ပါရှိရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်လည်းရဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်။
Over 1400 foreigners have visited mogok after restrictions on foreign tourists were lifted by some administrative units in mogok, according to the Ministry of Hotels and Tourism. These numbers are based on permits given to foreigners from January to November of this year. Kyauk Pyat That, Pan Lin, and Bernard villages are the regions that have be re-opened to foreigners. Although they are allowed to visit, foreigners must specify which route they will take and be accompanied byaguide. Furthermore, they must receive permission from Mandalay Region officials.
☼&nbsp6. Easy Money ☼
ဒီမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ။ ဒါမှန်မဟုတ်ဘူးနော်၊ အိမ်သာတံခါး။ သိတယ် စောင့်နေတာ။ အော် ရှူးပေါက်ချင်လို့လား။ ဘာလုပ်နေတာလဲ။ Pokemon ဖမ်းမိတော့မလို့ သွားပြီကွာ။ အဲ့လိုမရိုက်နဲ့ ပေးပေးရိုက်ပေးမယ်။ selfie ရိုက်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ နေပူလို့ အသားတွေ ညိုသွားပြီလားလို့ စစ်နေတာ။ ဟာ မသောက်သေးဘူးလား။ ကော်ဖီသောက်ရင် အိပ်လို့မရဘူး။ ငါကျ ပြောင်းပြန်။ အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကော်ဖီသောက်လို့မရဘူး။ ဟာဒါပေမယ့် ဒီည ညီမလေးရည်းစားလာမှာ၊ မအိပ်ချင်ဘူးကွာ။ သိပ်မပူလောက်တော့ဘူးထင်တယ်နော်။ ကွက်တိပဲ၊ iced coffee အရမ်းကြိုက်တယ်။ ပြောမယ်နားထောင်၊ ဒီကော်ဖီတွေကို ဟိုနားနေပြီးတော့ ဒီခွက်ထဲကို လှမ်းထည့်နိုင်မလား။ နဲနဲတော့ရမယ်။ တစ်စက်မှ မကျစေရဘူး။ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ တစ်သိန်းကြေးလောင်းမှာလား။ ရှုံးရင် တကယ်တစ်သိန်းပေးမှာလား။ ပေးမှာပေါ့ okayလား။ ရှုံးပြီ။ သူမလာသေးဘူးလား။ သူကသူ့အိမ်မှာပဲ အမြဲတန်းနောက်ကျတယ်။ တကယ်လို့ အမက သူ့ကိုကော်ဖီနဲ့ တမင်တကာပက်မယ်ဆိုရင် သူ့မျက်နှာ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ မသိဘူးနော်။ အဲလိုမလုပ်နဲ့၊ ဟိုတစ်ခါ ဖျော်ရည် မတော်တဆမှောက်ကျတာ မှတ်မိလား။ အဲ နင်တို့တွေ တွေ့လား။ မင်းမှာပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ပါလဲ။ သုံးသိန်းကျော်ကျော်ပါတယ်။ ကော်ဖီနဲ့ အောက်ကိုရော စားပွဲမှာကိုရော သူ့ဒူးပေါ်မှာရော ကော်ဖီနဲ့ တမင်ပက်လို့ရှိရင် စိတ်လည်းမဆိုးစေရဘူး ရယ်လည်းရယ်လည်းမယ် ပျော်လည်းပျော်စေရမယ် သုံးသိန်းကြေးလောင်းမှာလား။ အဲဒါ easy money လို့ခေါ်တယ်။
What are you doing? That's notamirror. That's the toilets' door. I know that! I’m waiting. Ha, you wanna pee! Hey, hurry up! So close! almost caughtapokemon! Here, let me take your picture. I'm not takingaselfie! I'm looking at my suntan. You didn't drink anything? If I drink coffee, I can't sleep. For me it's the opposite. If I sleep, I can't drink coffee. Wait, my boyfriend is coming tonight, I don't want to sleep! I guess it's not very hot anymore. That's fine, I love iced coffee. Listen to me…Do you think that if I throw this coffee from over there, I can get it into this cup? In part, maybe. Notasingle drop will miss! Absolutely impossible. Would you bet one hundred dollars? If you lose, will you really give me one hundred? Of course. Okay? You lost! She's still not here? It’s her home, but she's the one who is always late. What would she say if I threw some coffee on her? Don't do that! Don't you remember what happened when you accidentaly spilled some juice? Did you see what you’ve done?! How much money do you have on you? A bit more than three hundred. I bet you three hundred that if I spray some coffee on the table and on her knees, she won't be angry. She will be even happy! So, okay for three hundred? That's what I call "easy money"!
☼&nbsp7. Alanpya Pagoda ☼
လူသိနည်းပေမယ့် သမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ အလံပြဘုရားဟာ ရန်ကုန်မြို့ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ ၁၈၅၂ ခုနှစ်က အင်္ဂလိပ်တွေ ရန်ကုန်မြို့ကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်မှာ စစ်သင်္ဘောတွေကို ဒီဘုရားတည်ရှိတဲ့ ကုန်းတော်ကနေ အလံပြအချက်ပေးခဲ့လို့ အလံပြဘုရားရယ်လို့အမည်တွင်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတော့ စေတီတော်တည်ရှိရာကုန်းတော်ကိုလည်း ဂေါ်ရာကုန်းလို့အမည်တွင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စေတီတော်ရဲ့မူရင်းနာမည်က ဆံတော်ကြိုဘုရားလို့ဖြစ်ပြီး ရွှေတိဂုံစေတီတော်မှာ ဌာပနာဖို့ ပင့်ဆောင်လာတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆံတော်တွေကို ဥက္ကလာမင်းကြီးက လာရောက်ကြိုဆိုခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်းမြင့်ပေါ်မှာတည်ထားပြီး အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ဘုရားပရဝဏ်တစ်ခုလုံးမှာ တရားဘာဝနာ အားထုတ်နေတဲ့သူတွေတော့ မပြတ်ပါဘူး။ ခြင်္သေ့နှစ်ကောင်ဟာ ဘုရားရဲ့အရှေ့မုခ်ဦးမှာပဲရှိလေ့ရှိပေမယ့် အလံပြဘုရားမှာတော့ ခြင်္သေနှစ်ကောင်ဟာ ဘုရားရဲ့ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာ ထူးခြားစွာတည်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆံတော်ကြိုဘုရားကို မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၃) ခုနှစ်က ဥက္ကလာမင်း တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တာလို့လည်း သိရပါတယ်။ ဒီဘုရားဟာ စေတီတော်တစ်ဆူဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေအပြင် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ စစ်ပွဲကာလအတွင်းက သမိုင်းဝင်အထောက်အထားတွေကို ဖော်ပြတဲ့နေရာတစ်ခုလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Although people know little about it, Alanpya Pagoda sits onahistoric site on Shwedagon Pagoda road in Yangon. It was given the name Alanpya Pagoda (“Signal Pagoda”), because after the British took over the city of Yangon in 1852, warships were signaled from the high ground where it is situated. During British rule, the hill where the pagoda sits was known as Gaw Ya Hill. The pagoda’s original name was Sandawkyo Pagoda, as it is at the place where the king of Okkala received the Buddha’s hairs that weer brought to be enshrined at Shwedagon Pagoda. You can see people meditating all the time throughout the whole area of this quiet and peaceful hilltop pagoda. Although there are usually two lions on the façades of the entranceways to pagodas, Alanpya Pagoda is unusual in that it has two lions on its platform. Sandawkyo Pagoda was built by the king of Okkalapa in Maha Saka-raj Era 103 (181 AD). Along with these facts, we can say that this isaplace that providesaglimpse of history from the time of the Second Anglo-Burmese War.
☼&nbsp8. Arlein Nga Sint Pagoda ☼
မြန်မာနဲ့ ဥရောပဗိသုကာတွေ ပေါင်းစပ်လွှမ်းခြုံထားပြီး အာလိန်ငါးဆင့်ဘုရားလို့သိကြတဲ့ စေတီတော်ဟာ အင်းစိန်မြို့နယ်ထဲမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ဥရောပ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ရဲတိုက်နဲ့ခပ်ဆင်ဆင်ပုံစံတူပြီး ပြသာဒ်လို ဘုံအဆင့်ဆင့်နဲ့ ထိုးထွက်နေတဲ့ အာလိန်ငါးဆင့်ဘုရားကို ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်တွေနဲ့တွဲပြီး ထင်ရှားပါတယ်။ ဦးသူရ ဆိုတဲ့ ကရင် တိုင်းရင်းသား ဆရာတော်တစ်ပါးက ဦးနုအစိုးရလက်ထက်မှာ အိပ်မက်အရ ဒီအာလိန်ငါးဆင့်ဘုရားနဲ့ကျောင်းတော်ကြီးကို တည်ဆောက်ခဲ့တာလို့ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရ သိရပါတယ်။
၁၉၅၄ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေး ရပြီးခါစမှာ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ ဦးနုနဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသားသမ္မတ ဦးမန်းဝင်းမောင်တို့ရဲ့ ထောက်ပံ့အားပေးမှုနဲ့အတူ အာလိန်ငါးဆင့်ရယ်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ပုံစံတူ ဝင်္ကပါထည့်သွင်း တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဘုရားသုံးဆူထဲမှာ တစ်ဆူအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အချိန်ကာလက ပြည်တွင်းစစ်မီးတွေ တောက်လောင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ ရန်ကုန်အစိုးရလို့ခေါ်နေရတဲ့ အချိန်လဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘုရားက တခြားဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းကန်စေတီပုထိုးတွေနဲ့မတူဘဲ ပုံစံကွဲပြားမှုတွေလည်း ရှိနေတာပါ။
အတွင်းပိုင်းကို မတူညီတဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ပုံစံတွေကို ပေါင်းစပ် ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီး အပေါ်ဆင့်တွေက ထေရဝါဒ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့ မတူဘဲ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာတည်ဆောက်လေ့ရှိတဲ့ ရဲတိုက်တွေနဲ့တောင် တူညီနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦးရဲ့ဒီဇိုင်းက ၁၉ရာစုလောက်က ဥရောပရဲ့ ဗိသုကာလက်ရာတွေနဲ့တောင် တူညီတယ်လို့ သမိုင်းအထောက်အထားတွေမှာ ဆိုထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဥ် ကျင်းပလည်းရှိတဲ့ ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကိုလည်း ဒီဘုရားဝင်းထဲမှာ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။
အခုချိန်မှာတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေနဲ့ အာလိန်ငါးဆင့်တည်ရှိရာနေရာမှာ ခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေ ထူထပ်နေသလို အရံစေတီငယ်တွေကလည်း အရောင်တွေပြယ်လွင့်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Arlein Nga Sint Pagoda, in Insein Township, incorporates both Myanmar and European architecture. Famous for being associated with the Kayin New Year festival, it is built with stacked tiers inastyle that somewhat resemblesacastle fromaEuropean movie. History has it that Arlein Nga Sint Pagoda and monastery were built according toadream of U Thura, an ethnic Kayin Sayadaw during the time of U Nu’s government. In 1954 at the start of independence, Kayin leader U Mahn Win Maung, in cooperation with Prime Minister U Nu, founded Arlein Nga Sint Pagoda, one of only three pagodas in Myanmar that includesalabyrinth. This wasatime when civil wars were going on in the country.
Arlein Nga Sint Pagoda is built inaunique style and is quite distinct from other Buddhist structures. The interior was created with mixed styles rather than in the traditional way; its tiers make it resembleaFrench castle more thanaTheravada monastery. History shows that the design of the structure is reminiscent of 19 century European architecture.
The Kayin New Year Festival that is celebrated on the grounds of the pagoda attracts throngs of people each year.
Nowadays, the place with interesting historical memories where Arlein Nga Sint Pagoda sits is overgrown with bushes, and its little surrounding stupas are faded.
Last updated: 20200116